3 mashruuc oo leh RGB Led iyo Arduino dhammaan heerarka | Qalabka bilaashka ah
Mid ka mid ah mashaariicda ugu horreeya ee adeegsade ka bilaabaya adduunka elektaroonigga uu ka shaqeynayo nalalka iyo gaar ahaan laydhadhka. Qalooca barashada cunsurkan ayaa ah mid aad u fudud daqiiqado gudahoodna waxaan ku gaari karnaa waxyaabo waawayn sida laambadaha casriga ah, astaamaha iftiinka ama walxaha xaqiijinta ee mashruuc weyn.
Si kastaba ha noqotee, dhawaanahan, isticmaaleyaashu waxay baranayaan sida loo isticmaalo RGB LEDs, kala duwanaansho ku yimid caan aadna waxtar ugu leh mashaariic badan. Laakiin Waa maxay? Maxay yihiin mashaariicda ugu caansan ee aan ku abuuri karno diodiyadaha cusub ee RGB Led?
1 Waa maxay RGB Led?
2 Led Led RGB Cube aan xaddidnayn
3 Easy LED RGB Saxeex
4 Shaxda Taabashada RGB Pixel
5 Muxuu yahay mashruuc mudan in la dhiso?
Waa maxay RGB Led?
Laydh (LED) waa diode nalka dhaliya. Qalab qaali ah oo sahlan oo la adeegsado oo leh sabuurad kasta oo elektaroonig ah xitaa iyada oo aan la helin. Hawlaha ugu muhiimsan waa tamarta hoose ee ay isticmaasho iyo qaabab kala duwan oo aan ka helno LED-yada. Marka, si ka duwan nalalka dhaqameed ee na iftiimaya, Laydhka ayaa noo ogolaanaya inaan ku isticmaalno aalado kala duwan oo xitaa abuurno qaabab kale oo ka fog qaabka guluub dhaqameedka. Saacadaha waxtarka leh ee loo yaqaan 'LEDs' sidoo kale aad ayey uga sareeyaan aaladaha kale. Sidaa darteed, sida guluubka nalka, diode noocan ah wuxuu bixiyaa saacado badan oo iftiin ah marka loo eego guluubka caadiga ah; Iyada oo qayb ka ah shaashadda, pixels-yada LED-ka ayaa bixiya nolol ka badan tan caadiga ah; Iyo sidaas qalabka kala duwan ee adeegsada tikniyoolajiyadda.
Laakiin kiiskan waxaan ka hadlaynaa nalalka RGB, nalalka caanka ah ee sii kordhaya. Sababta guushani waxay ugu wacan tahay fursadaha ay ka bixiyaan nalalka caadiga ah. Diode-ga loo yaqaan 'LED diode' wuxuu bixiyaa keliya hal midab oo iftiin ah, oo ah wax aanan ku beddeli karin aaladda illaa aan beddelno diode-ka. Rio Led diode wuxuu soo saaraa iftiin seddex midab leh: Casaan (Casaan), Cagaar (Cagaar) iyo Buluug (Buluug) iyo isku darkaSi kale haddii loo dhigo, waxay u beddeli kartaa midabka sida aan u jecel nahay iyadoon loo baahnayn in la beddelo diode-ga. Guusha laydhadhka RGB LED waxay ku jirtaa suurtagalnimada in la beddelo midabka iftiinka iyada oo aan la beddelayn diode, wax aad u macquul ah oo loogu baahan yahay oo keliya aqoonta barnaamijka.
Led Led RGB Cube aan xaddidnayn
Mashruucani wuxuu ka kooban yahay abuurista hal kuub oo midabyo ah oo isbeddeli kara hadba waqtiga aan haysanno ama si fudud dhowrkii ilbiriqsiba. Infinite Led RGB Cube waa xabbad iftiin ah, oo u shaqeyn karta sidii laambad diode ah. Natiijada ugu dambeysa waxay noqon doontaa isku darka rgb led diode iyo Arduino.
Dhismaheeda waxaad u baahan tahay 512 RGB Led diodes, 6 crystals, microcontroller oo si fiican noqon kara Arduino UNO, fiilo ama batteri si ay u xoojiso dioodyada iyo saldhig taageera dhismaha oo dhan. Markaan tan helno, waa inaan mideynaa dhammaan shucaacyada si ay u abuuraan kuub ama u yeeshaan qaab cubeed. Sirta dhisida qaab-dhismeedkan ayaa ah in la laabo hal biin oo diode ah oo u dhigma diode, iyadoo xagal qumman laga abuurayo biinka kale. Waxaa jiri doona hal dhinac oo ka mid ah kubeelka oo aan xiriir ka dhexeyn midba midka kale, laakiin dhammaantood waxay ku xirnaan doonaan hal dGB oo hogaaminaya RGB.
Marka aan helno dhammaan qaab-dhismeedka la abuuray, waa inaan ku biirnaa biinanka ku hadhay guddiga microcontroller. Halkaa marka ay marayso, waa in aan tilmaan ka bixinnaa in dhinaca cubeedkani uu leeyahay 8 x 8 diod, oo abuuraya cube 8 x 8 x 8 RGB LED ah. Marka, waxaan ku biiraynaa biinanka diodyada ka furmay cube-ka guddiga waxaanna u soo bandhignay barnaamij u daaraya diode cube si tartiib tartiib ah iyo midabbo kala duwan. Marka wax walba la soo ururiyo, waa inaan isticmaalnaa kristantarrada si loo abuuro nooc ka mid ah urn ilaaliya oo daboolaya dioodyada, salka wuxuu taageeri doonaa oo keliya ma aha diode cube laakiin sidoo kale urn aan abuurnay. Dhismaha Infinity Led RGB Cube waa mid aad u fudud laakiin si fudud ayaa loo qaabeeyey. Weli, gudaha Tilmaamaha Waxaad ka heli doontaa hage tallaabo-tallaabo ah dhismihiisa.
Easy LED RGB Saxeex
Mashruucan ayaa sifiican loo yaqaan oo ka faaiido badan laakiin sidoo kale ka dhib badan dhismihiisa mashruucii hore. Easy LED RGB Sign waa calaamad macluumaad oo lagu dhisay diodes iyo Arduino. Mashruucani wuxuu ubaahan yahay 510 RGB LEDs ama waxaan tan ugu badali karnaa xargaha isku nooc ah. Fikradda ayaa ah in la dhiso leydi ah 10 x 51 LEDs. Waxaan sidoo kale u baahanahay 3 xaashi acrylic ah oo u adeegi doona kaalin ahaan iyo ilaaliye u ah Easy LED RGB Sign oo aan abuurnay. 510 RGB LEDs, fiilooyin lagu sameeyo fiilooyinka, guddiga microcontroller sida Arduino UNO iyo batari si ay u xoojiso diode iyo sidoo kale guddiga Arduino.
Marka hore waa inaan abuurnaa qaabdhismeedka diodiyaha dushiisa. Waan sameyn karnaa sida aan dooneyno laakiin xeelad fiican ayaa ah inaan u isticmaalno mid ka mid ah xaashiyahaas loo yaqaan 'acrylic sheets' sida taageerada nalalka LED-ka, maadaama ay daah furan tahay, laguma qadarin doono natiijada ugu dambeysa. Iyada oo leh fiilo khafiif ah waa inaan ku darnaa diodiyada oo aan ku xiraa microcontroller. Marka wax waliba ku lifaaqan yihiin, waxaan ku xireynaa microcontroller-ka batteriga iyo dhexdeeda ayaan ku soo bandhigeynaa barnaamijka aan dooneyno. Barnaamijku wuxuu qaban doonaa shaqada soo socota:
Daar LED-yada qaarkood.
Mid kasta oo ka mid ah dioodyadan wuxuu yeelan doonaa midab gaar ah.
Natiijadu waxay noqon doontaa abuuritaanka xarfaha, astaamaha ama calaamadaha aan u adeegsan karno xaaladaha qaarkood. Easy LED RGB Sign waa mashruuc aad u xiiso badan maadaama ay waxtar badan leedahay, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan abuurno calaamadaha iftiimiya ee aan dooneyno. Waxaan haynaa macluumaad dheeri ah oo kusaabsan dhismihiisa keydka Instructables. Laakiin ma aha mashruuc xidhan iyo Waanu kala duwanaan karnaa tirada diooorka ama waxaan si toos ah u badali karnaa barnaamijka fuliya iftiinka dioodiyada si uu si kala duwan ugu shaqeeyo. Awoodda ayaa kordheysa markaan isku darno calaamadaan RGB LED iyo Arduino, anagoo awoodi karno inaan abuuri karno calaamado xariif ah ama xiriir la leh kombiyuutarada sida calaamadaha xirfadaha
Shaxda Taabashada RGB Pixel
Shaxda Led RGB Pixel Touch waa mashruuc madadaalo leh oo diodyada u rogaya miis fudud oo lagu ciyaaro. Mashruucani wuu ka dhib badan yahay mashruucyadii hore laakiin dhismihiisu waa mid aad u fudud. Xaaladdan oo kale waxaan isku dari doonaa wax ka badan RGB iyo LEDs Arduino, maadaama aan sidoo kale adeegsan doonno dareemayaal taabasho ama dareemayaal IR ah. Tan waxaan u baahan doonaa qalabka soo socda:
Shax leh dusha hufan.
Matrix ah 10 x 16 RGB LEDs.
Tix ka kooban 10 x 16 dareemayaal taabasho IR ah.
Kaarka SD ama MicroSD si loo kaydiyo xogta.
Afayeen caaqil ah oo kuxiran Bluetooth.
Xaaladdan oo kale waa inaan abuurnaa noodhadh ama "fureyaal" sameeya isgoyska dareemaha taabashada iyo diode-ga taasina waxay noqon doontaa kontaroolada aan riixi doonno marka aan miiska la ciyaareyno. Qaab noocan oo kale ah oo noodhku u soo saari karo macluumaad haddii aan taabno guddiga oo wuxuu soo saari karaa nal. J) Haa, Waxaan ku ciyaari karnaa miiskan tetris-ka, ciyaaraha xusuusta muuqaalka, abeesadii caadiga ahayd, ping-pong ama samee miis fudud. Isku soo wada duuboo waxaan yeelan doonaa 160 noodes oo aan ku dhejin karno qaab ah 10 x 16 matrix ah.
Waxaan dhigeynaa shaxdan hoosta dhalada miiska. Galaaska miiska waa in lagu beddelaa dusha jilicsan sida balaastigga looxa. Tan waxaa loo sameeyaa si taas ka duwan dareeraha ayaa shaqeeya marka aan riixno.
Hadda, wax walboo la soo uruuriyay, waa inaan abuurnaa barnaamijka ku shaqeynaya kuna shaqeynaya shaxdan. Waxaan isticmaali karnaa ciyaaro sida tetris ama si fudud ciyaarta caadiga ah ee "Simon". Waxaan gelineynaa guddiga microcontroller-ka waxaanna ku xireynaa shaxda. Waan awoodnaa kudar codkaan mashruucan mahadnaqa kuhadalka bluetooth-ga oo aan kuxiran karno dareeraha bluetooth taasi waxay leedahay guddiga microcontroller.
Tani waa soo koobida mashruuca Led RGB Pixel Touch Table laakiin tilmaamihiisu ma sahlana sida la moodo. Abuuritaanka noodhadhku waxay u baahan yihiin qorshe iyo abuurid noodhadh yar, oo leh software-ka ciyaarta isla waxbaa dhaca. Halkan waxaan rabnay kaliya inaan ka hadalno fikradaha waaweyn iyo waxa ka dhalan kara. Laakiin waxaad hage dhammeystiran u leedahay dhismaheeda xidhiidhkan.
Muxuu yahay mashruuc mudan in la dhiso?
Waxaan ka wada hadalnay saddex mashruuc oo leh LED-yada RGB taasi waa fududahay in la dhiso oo aan qaali ahayn. In kastoo inbadan oo idinka mid ah ay aragtay in aan isticmaalno qadaryo badan oo dyoodyo ah, waa inaan dhahnaa qiimaha kuwaan cusubi aad ayuu u hooseeyaa, aad ayuu u hooseeyaa oo tirada noocan oo kale ah waxay kaliya ku kacaysaa labo euro. Dhammaan mashaariicdu waxay leeyihiin astaamo gaar ah iyo codsigooda. Shaqsi ahaan Waxaan kugula talinayaa inaad qabato dhamaan mashaariicda. Marka hore wuxuu dhisi lahaa kubeelka nalalka; markii dambe wuxuu dhisi lahaa calaamadda iftiinka leh ugu dambeyntiina wuxuu dhisi lahaa miiska ciyaarta. Amarka dhameystirka ayaa muhiim ah maadaama aan ka gudubno mashruuc fudud una gudubno mashruuc aad u adag. Sikastaba xaalku ha ahaadee, dhismaha seddexdan mashruuc kadib natiijadu waxay noqon doontaa isku mid: waxaan ku guuleysan doonnaa isticmaalka diyoodyadan. Adigana Waa maxay mashruuc aad ugu jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » 3 mashruuc oo leh RGB Led iyo Arduino